Imowudi yeNightscape iza kuza kwiRealme 1, 2 Pro kunye ne-U1 kule semester yokuqala | I-Androidsis
Imowudi yekhamera yeNightscape iya kufika kwiRealme 1, 2 Pro kunye neU1 ngePie yePie kule semester yokuqala
Olunye lweempawu ezibonakalayo zeRealme 3 yeyayo Imowudi yobusuku. Oku kukuvumela ukuba ufumane iifoto eziqaqambileyo ngengxolo encinci kwaye ngaphandle kokulahleka komgangatho kwiimeko eziphantsi zokukhanya.
Malunga neeveki ezimbini ezidlulileyo, kwatyhilwa ukuba Iifowuni ezindala zeRealme nazo uza kuwufumana umsebenzi ngokuhlaziya. Ngoku, i-CEO yenkampani ityhile ukuba iza kufika nini, ngeposi kwi-twitter.
Ngeenkcukacha, uMadhav Sheth, oyintloko ye-Realme Mobiles, wabelane nge-tweet kutsha nje apho wabhengeza khona Imowudi yeNightscape okanye yasebusuku iya kwiRealme 1, Realme 2 Pro y I-Realme U1 Kwisiqingatha sokuqala sika-2019. Uye wongeza ukuba inqaku liza kuza kunye nohlaziyo ku Android Pie, njengoko bekuxelwe kwangaphambili kwiiveki ezininzi ngoku.
I-Rm 1, i-2 Pro, kunye nabasebenzisi be-U1 baya kufumana imowudi "yeNightscape" yokufika nohlaziyo lwabo lwePie ye-Android kwisiqingatha sokuqala se-2019.
Icawe emnandi !!
-Madhav Sheth (@ MadhavSheth1) Matshi 24, 2019
Okwangoku, akukho lwazi ngqo malunga nokuba iRealme 2 kunye neRealme C1, ezinye iiterminal ezimbini, ziya kuyifumana njani ikhamera, kodwa ubuncinci ngoku siyazi ukuba ayizukufika kwisiqingatha sokuqala sonyaka kubo. Okwangoku, inkampani inokubonakalisa iinkcukacha ezichanekileyo malunga noku. Ungalibali ukuba isibhengezo semihla iimodeli ezichazwe apha ngasentla ziya kuyifumana (ukuba iya kunikwa) ayikho, ebingazukufana kubo bobathathu. I-firmware yayiza kufika ngamaxesha ahlukeneyo nganye nganye.
I-Realme U1, ifowuni yokuqala eneprosesa yeHelio P70 evela eMediatek, ngoku isemthethweni
Uhlaziyo aluzukuhamba kuphela nenkqubo entsha yokusebenza kwe-Android, kodwa kunye nokuphuculwa okuninzi, izilungiso kunye nemisebenzi emitsha yezixhobo, notshintsho olukhulu kunxibelelwano. Yintoni egqithisile, ziya kuhanjiswa nge-OTA, njengoko kuhlala kunjalo, kwaye inokuba nobungakanani obukhulu, kuthathelwa ingqalelo ubunzima obubekwe yi-Android Pie.
Abavelisi beefowuni abaliqela sele benazo iindlela zekhamera yasebusuku, ezinje ngeXiaomi, Samsung, Huawei, Oppo, OnePlus nabanye. I-Realme ayikho ngaphandle, njengoko sibona. Kuyathakazelisa ukubona ukuba uninzi olwahlulweyo oluphakathi kunye neemodeli ezikuluhlu oluphantsi zifumana inqaku. Kungekudala, nabanye baya kuyifumana. Siza kubhala iindaba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Imowudi yekhamera yeNightscape iya kufika kwiRealme 1, 2 Pro kunye neU1 ngePie yePie kule semester yokuqala
Ukuhanjiswa okutsha kwe-OnePlus 7 kubonisa ikhamera yayo
I-Android Auto ihlaziywa ukuze ihambelane nezikrini zepanoramic zezona zithuthi